I-6.2 Splines - i-Geofumadas
Ngakolunye uhlangothi, i-splines yiindidi zeengcingo ezithambileyo ezidalwe ngokweendlela ezikhethiweyo ukutolika amaphuzu abonisiwe kwisikrini.
Kwi-Autocad, i-spline ichazwa ngokuba yi "Bezier-spline curve" engalinganiyo (NURBS), okuthetha ukuba umqolo awubunjwanga zii-arcs okanye iiarcs ze-elliptical. Yijekethi egudileyo leyo, ewe, isinceda siyile inxenye yoyilo ngeejika ezinokuthi zisinde kwijometri yezinto ezilula. Njengoko umfundi sele ecinge, uninzi lweendlela zezithuthi, umzekelo, kunye nezinye izixhobo ze-ergonomic, zifuna umzobo wolu hlobo lwamajika. Zimbini iindlela zokwenza i-spline: kunye ne-setpoints okanye i-vertices yokulawula.
Isithuba esinezinto ezibekiweyo sidlula kwiimpawu eziboniswe kwiscreen. Nangona kunjalo, ukhetho lwe "Knots" lukuvumela ukuba ukhethe iindlela ezahlukeneyo zezibalo zokubonisa ulungelelwaniso lophawu, ezinokuthi zivelise ijika elincinci lamanqaku afanayo.
Emva koko, ukhetho lwe "toLerance" lomyalelo lubala ukuchaneka apho ijikajika liya kuhambelana namanqaku amiselweyo. Ixabiso lohlengahlengiso elilingana no-zero liya kubangela ukuba ijika igqithe kula manqaku, naliphi na ixabiso elingelilo "liya kuthi" lihambise ijika lihambe namanqaku. Makhe sijonge kulwakhiwo lomqolo olunamanqaku asetwa kodwa kunye nokunyamezelana okungafaniyo.
Unokuba sele uqaphele ukuba ekuqaleni komyalelo sinokukhetha "Indlela", esivumela ukuba sitshintshe kwindlela yesibini yokwenza i-splines, oko kukuthi, ukusebenzisa ii-vertices zokulawula, nangona nathi singayikhetha ngokuthe ngqo le ndlela kwiqhosha laso. Iribhoni
Iiplines ezidalwe ngamehlo okulawula ziveliswa ngamaphuzu ukuba, ndawonye, ​​ivelise imigca yesikhashana ye-polygon eza kugqiba umlo we-spline. Inzuzo yale ndlela kukuba le miqobo inika ukulawula okukhulu phezu kokuhlelwa kwe-spline, nangona, ukulungiswa, kunokwenzeka ukutshintsha umgca wendawo yokulungelelanisa ukulawula iilenti kunye nendawo efanayo.
Nangona ukuhlelwa kweempepha kuhloswe kwisahluko se-18, sinokulindela ukuba xa sikhetha umgca, sinokusebenzisa ukukhanda kwayo kwantantathu ukuguqula umboniso weendawo zokuguqula okanye izithintelo zokulawula. Singakwazi ukongeza ezinye okanye ezinye, zihlengahlengise okanye zisuse.
Post edlulileyo«Edlulileyo 6.1 Polylines
Post Next 6.3 CloudsOkulandelayo "